Metal Cable Gland ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Metal Cable Gland စက်ရုံ
Multi-hole Metal Cable ဂလင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားနီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါ (အမိန့်နံပါတ် .: HSM / nxd)၊ သံမဏိ (အမိန့်နံပါတ် HSMS / nxd) နှင့်အလူမီနီယမ် (အမိန့်နံပါတ် .: HSMAL / nxd) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတွင်းပေါင်းစုံသတ္တုကေဘယ်ကြိုးများဖြင့်သင့်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
xNxd: N ကအပေါက်အရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ D သည်အချင်းအချင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုနီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါ (အမိန့်နံပါတ် .: HSM)၊ သံမဏိ (အမိန့်နံပါတ် HSMS) နှင့်အလူမီနီယမ် (အမိန့်နံပါတ် .: HSMAL) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုကေဘယ်ကြိုးများဖြင့်သင့်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။